News Collection: राष्ट्रविरोधी काममा पनि बाबुरामको रेकर्ड ब्रेक
राष्ट्रविरोधी काममा पनि बाबुरामको रेकर्ड ब्रेक
काठमाडौ । बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको पद वहाली गर्दा उनले केही गर्छन भन्ने आममानिसमा विश्वास र भरासा जागेको थियो। उनको मुस्ताङ छाप गाडीले मितव्ययिताको खडेरी परेको राजनीतिमा नैतिकताको अवश्य पनि केही आशा जगाएको थियो। त्यो आशा समयक्रममा उनका बोली र व्यवहारमा देखिएको बद्लावले निराशामा परिणत भयो। आफ्नो शासन सत्ता अनन्तकालसम्म लम्ब्याउन उनले गरेको हर्कतले मुलुकलाई अस्थिर बनाईदियो।
यही अस्थिरताको जगमा टेकेर पछिल्लो पल्ट उनले गरेको राष्ट्रविरोधी गतिविधिले कुनै बेला नेपाली राजनीतिमा नायकको छवी बनाएका भट्टराई अहिले खलनायकमा परिणत भएका छन्।
प्रधानमन्त्री पदमा वहाली हुँदा भट्टराईले ४५ दिन भित्र शान्ति र संविधानमा प्रगति नभए आफूले राजीनामा गर्छु भनेका थिए। तर ,त्यो उनको झुठो बोली रहेछ भन्ने कुरा उनले संविधानसभाको हत्या गरेपछि प्रमाणित भएको छ। उनी शान्ति र संविधान होइन, मात्र आफ्नो शासन सत्ता लम्ब्याउन चाहदा रहेछन भन्ने कुरा व्यवहारमा देखिएको छ। काम भन्दा प्रचारबढी रुचाउन भट्टराई नेपाली राजनीतिमा ढोगी र आडम्बरी नेताको रुपमा परिचित हुन थालेका छन्। उनको करिब १० महिने शासनकालमा जनताले राहत होइन, आहत बढी पाएका छन्। यो दश महिनाको अवधिमा जनताले उनलाई सम्झदा संविधानसभाको हत्यारा, भ्रयटाचार र अनियमितताको विस्तार कर्ता, मल अभाबका कारण किसानमारा, प्रशासनसयन्त्रको ध्वस्तकर्ता लयायतका सन्दर्भमा सम्भि्कने छन्। प्रधानमन्त्री भट्टराईले भ्रष्टाचार , अनियमितता र प्रशासनिक हस्तक्षेपमा मात्रै होइन, राष्ट्रघातमा समेत यस अघिका सरकार प्रमुखहरुको रेकर्ड व्रेक गरेका कारण उनी मुलुकको संचारमाध्यममा राष्ट्रघाती सरकार प्रमुखका रुपमा छाइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भारतीय एजेण्ट भएको फुटेर गएका उनकै पार्टी नेताहरुले आरोप लगाएका थिए। उनीहरुले लगाएको आरोपलाई आममानिसले पत्याएका थिएनन्। त्यो आरोप कतिमय मानिसले पार्टी अन्तरसघर्षको उपचको रुपमा हेरेका थिए र त्यसरी नै अर्थाएका थिए। तर, समयक्रममा उनी राष्ट्रविरोधी र देशघाती प्रधानमन्त्री भएको ए घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरेको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरउन्ति सुधार र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सरकारले भारतीय कंम्पनीलाई दिन आन्तरिक तयारी अगाडि बढाएको समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईको राष्ट्रिघाती अनुहार उदागिएको हो। निमार्ण स्वामित्व सञ्चालन र हस्तान्तरण अर्न्तगत विमानस्थलको जिम्मा लिन भारतको आईएल एण्ड एफएस कंम्पनीलाई दिन भित्रभित्रै सरकारले आन्तरिक प्रक्रिया अगाडि बढाएको केही दिन अघि सार्वजनिक भए पछि भट्टराई सरकारको राष्ट्रघाती अनुहार उदागिन पुगेको हो। सो कंम्पनीसग प्रधानमन्त्री भट्टराईले कार्तिक महिनाको पहिलो साता गरेको भारत भ्रमणको क्रममा लगानी सुरक्षा प्रत्याभूत गरेका थिए। कंम्पनीले लगानी गर्न लागेको ईच्छापत्रको आधारमा सरकार र कंम्पनीबीच समझदारी भएको समाचार केही दिन अघि सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीको भारत भक्रिको चरम नमूना सार्वजनिक भएको हो। विमानस्थल जस्तो संवेदनशिल ठाउँमा विदेशी कम्पनीलाई सुधारको जिम्मा दिनु राष्ट्रविरोधी काम भएको चौतर्फी आलोचना भएको छ।
असार महिना सकिन लागि सक्दा पनि सरकारले किसानहरुलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउँन सकिराखेको छैन्। मल नपाए किसानहरु आफ्नो बाली विग्रने भो भन्ने चिन्ताले छट्टपटाइरहेका छन्। तर सरकारले अहिले सम्म मल उपल्ाब्ध गराउँनका लागि उल्लेखनी त्यस्तो कूनै प्रभाबकारी कदम चालेको छैन्। कृषि प्रधान मुलुकमा किसानका लागि अत्यावश्यक वस्तु मल हो। त्यही मल यस पाला समयमा नपाएका कारण आमकिसानका खेती विग्रिने भएको छ। मल समयमा सरकारले उपलब्ध नगराएका कारण गरिब किसानमात्र त्यसको मारमा पर्ने होइन, समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई नै त्यसले नकरामत्मक असर पार्ने छ। समयमा नै मल उपल्ाब्ध गराउँन नसक्ने
सरकारको नालायक पन हो। असारमा किसानलाई मल चाहिन्छ भन्ने सरकारलाई थाहा नभएर एकाएक यसको अभाब भएको होइन, सरकारले जनताको सवाललाई वेवास्ता गरेका कारण असारमा मलको हाहाकार भएको हो। भाषणमा गरिब किसानका कुरा गर्ने , जनताको घरमा गएर रात विताउने तर जनतालाई प्रत्यक्ष असर पुर्यााउने मल अभाव भएको महिनादिन वित्दा पनि मलको जोहो गर्न तत्पर नहुने सरकार कसरी जनताको सरकार हुन सक्छ , आममानिसहरुले यतिखेर प्रश्न उठाउँन थालेका छन्। मल पाइने आसमा सदरमुकाममा दिनभर लाइनमा बसेर जनता साँझ रितो हात फर्किरहेका छन्। तर, भट्टराई सरकारले यी सबै दृश्य देखेको नदेखै गरिरहेको छ।
अन्नतकाल सम्म शासनसत्ता संचालन गर्ने कुत्सित योजनाका साथ बाबुरामले संविधानसभाको हत्या गरेका थिए। उनको नेतृत्वको यही सरकारले नै उनले घोषणा गरेको संविधानसभाको चुनाव गराउने उनले बताउँदै आएका थिए। उनको सरकारलाई राष्ट्रपति डा.रामबरण यादवले कामचलाउ सरकार घोषणा गरिदिए। तर, पनि उनले यही सरकार निरन्तर कायम रहने र यही सरकारले चुनाब गराउने बाल हठ प्रर्दशन गर्दै आएका छन्। जब कि उनको सरकारको नेतृत्व कांग्रेस र एमालेले लगायतका २७ दल मान्न तयार छैनन्। त्यति मात्रै होइन, सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको उनकै फुटेर गएको पार्टी माओवादीले उनको नेतृत्वको सरकार नमान्ने घोषणा गरिसकेको छ। त्यसरी नै सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको मधेसवादी पार्टी पनि यसबीचमा फुटेको छ। र, फुटेर गएको पार्टीले समेत बाबुराम सरकारको राजीनामा माग गर्दै आएको छ। त्यति मात्रे होइन, राष्ट्रपतिले समेत सहमतीय सरकारको लागि राजीनामा दिएर मार्ग प्रर्शस्त गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्। तर पनि यो बास्तविक यथार्थलाई वेवास्ता गर्दै भट्टराईले राजीनामा नदिने अडि कसेर बसिरहनु भनेको बाल हठ होइन र?
प्रधानमन्त्री भट्टराई माओवादीमा मिडिया फ्रेण्डली नेताका रुपमा समेत परिचित थिए। मुलुकका मुलधारका मिडियामा प्रधानमन्त्री हुनु अघि उनको प्रशम्सामा थुपै कथा र गीतहरु कोरिएका छन्। त्यतिबेला मिडियाहरुले एकोहोरो रुपमा उनलाई हिरो बनाएर समाचार, लेख र समाचार टिप्पणीहरु प्रकाशित गर्दा उनलाई मिडिया प्रिय लागेको थियो। तर अहिले त्यही मिडियाहरु उनको आँखाको कसिगर बन्न थालेका छन्। संसारका हरेक तानाशाहा शासकहरु मिडियामाथि अनुदार बन्छन भन्ने कुराको पुष्टि भट्टराईका पछिल्ला गतिविधिहरुले गरेका छन्।
पछिल्लो पल्ट सरकारले संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हक माथि ठाडो हस्तक्षेप गर्न थालेको एक दुईवटा उदाहरण काफी छ। इमेज न्यूज एफएम र नेपाल टेलिभिजनमाथि गरेको हस्तक्षेप नै प्रधानमन्त्री भट्टराईले सञ्चार माध्यममाथि देखाएको अनुदार व्यवहारको ठोस प्रमाण हो। सञ्चार मन्त्रालयले हरेक दिन प्रशासरण हुने जनचासो कार्यक्रम निष्पक्ष नभएको भन्दै प्रस्सतोतामाथि तत्काल कारवाही अघि बढाउन जेठ ७ मा निर्देशन दिएको थियो। त्यसरी प्रतिपक्ष दलहरुले राजधानीको खुल्लामञ्चमा गरेको आमसभाको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेकोमा त्यसका कायममुकायम महाप्रबन्धक दिपकमणि धिताललाई कारवाही गरी पदबाट हटाइएको छ।
'रअ' को सहयोगी
दुई बर्ष अघि देखि लगातार प्रचण्ड र बाबुरामसँगै एउटै कमिटीमा बस्दै आएका र अहिले फुटेर गएका नेताहरुले बाबुराम र प्रचण्डलाई 'रअ'को एजेण्ट भएको आरोप लगाएका थिए। त्यसरी आरोप लगाउनेमा जनयुद्धताका भारतीय जेलमा परेका सिपी गजुरेल र महासचिव रामबहादुर थापा बादलले लगाएका थिए। त्यतिबेला पार्टी भित्रको अन्तरसंघर्षका कारण यस्तो आरोप लगाउको हुनसक्ने आम मानिसले सोचेका थिए।
केही समय अगाडि प्रचण्ड आफ्नो परिवारको साथमा झापा हूँदै सिलगुढी लागेका थिए। प्रचण्ड कहाँ गयो होलान् भनेर राजधानीमा खुलदुली मच्चिएको बेला उनका उनकै पार्टीका महासचिव प्रचण्ड 'रअ'को एजेण्टलाई भेट्न गएको बताएका थिए। त्यतिबेला लागेका यी आरोपहरु सत्यको निकट रहेको भारतीय पक्षबाट खुलासा भएको छ। केही समय अघि अमेरिकामा प्रकाशित नेपाल इन्ट्रान्जिसन फर्म पिपुल्स वार टु फ्रेजाइन पिस नामक लेख स्रग्रहमा नेपालमा काफी चर्चित नयाँ दिल्लीको जवाहरलाल नेहरु युनिभसिटीका प्राध्यापक र हाल सिँगापुरमा भिजिटिङ्ग प्रोफेसर रहेका नेपालविज्ञ एसडी मुनिको पनि एउटा लेख प्रकाशित छ। यस लेखमा डा. भट्टराई 'रअ'को सहयोगी रहेको उल्लेख गरिएको छ।